MultiJFatlSignal - MT5 Indicator သည်
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 25, 2021
နေအိမ် MT5 Indicator သည် MultiJFatlSignal
The indicator JFatlmq5 uses SmoothAlgorithms.mqh library classes ( MQL5 Include အ terminal_data_folder ကူးယူရဦးမည်). ထိုအတန်းများအသုံးပြုမှုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့သည် “နောက်ထပ် Buffer အသုံးပြုခြင်းမရှိပါကအလယ်အလတ် Calculator များအတွက်စျေးနှုန်းစီးရီးပျမ်းမျှ”.
MultiJFatlSignal isaMetatrader5(MT5) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Copy MultiJFatlSignal.mq5 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove MultiJFatlSignal.mq5 from your Metatrader5ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးPivot Lines TimeZone
Next ကိုဆောင်းပါးiEnvelopes HTF